Manakana ny aretin'andoha: maninona ny endrika an-tserasera no manampy amin'ny fandrefesana ny ROI | Martech Zone
Ny mpampiasa vola dia afaka mandrefy ROI amin'ny fotoana tena izy. Mividy stock izy ireo, ary amin'ny fijerena ny vidin'ny stock amin'ny fotoana rehetra, dia azon'izy ireo fantarina avy hatrany raha tsara na ratsy ny taha ROI.
Raha mba mora ho an'ny mpivarotra izany.
Ny fandrefesana ny ROI dia iray amin'ireo asa lehibe indrindra amin'ny marketing. Raha ny marina dia iray amin'ireo asa sarotra indrindra atrehantsika isan'andro. Miaraka amin'ireo angona rehetra izay miraraka avy amin'ny loharano marobe, dia tokony ho dingana mahitsy izy io. Rehefa dinihina tokoa, nolazaina taminay fa manana angon-drakitra betsaka noho ny teo aloha izahay ary mampiasa ny tsara indrindra Analytics fitaovana. Na izany aza, tsy maninona na mahazo data maro ianao raha tsy feno sy tsy marina.
Tsy maninona na lehibe na matanjaka be ny rindrambaiko fandalinanao, tsara ihany raha ny tahiry voarainy. Mora loatra ny mandray fanapahan-kevitra tsy marina miorina amin'ny angona tsy marina. Fanampin'izay, mety ho fanamby ny mamantatra ireo antony manokana nahatonga ny fividianana. Indraindray, ny fandrefesana tsara ny fihetsiky ny mpanjifa dia mety hahatsapa ho toy ny manandrana manisy jello amin'ny rindrina. Ka inona no azonao atao mba hahazoana antoka fa mahazo ny angon-drakitra marina ianao?
Mampiasà endrika an-tserasera
Fitaovana mahery vaika ny endrika an-tserasera satria afaka fenoina toerana rehetra izy ireo, ao anatin'izany ny alàlan'ny finday avo lenta, takelaka na solosaina. Raha toa ka mihazakazaka manao asa an-tongotra ny mpanjifanao dia tokony hanao izany koa ianao. Ny haavon'ny avo lenta sy ny fanamorana dia midika hoe afaka mamorona endrika manampy amin'ny fanatontosana ny valiny ilainao ianao, toy ny firaka mitarika, endrika fanadihadiana sy valiny ary fisoratana anarana amin'ny hetsika. Raha mila anarana sy adiresy mailaka fotsiny ianao dia afaka mamorona endrika fifandraisana tsotra izay manao izany. Toy izany koa, raha mandroso kokoa ny zavatra ilainao, toy ny fangatahana asa, azonao atao koa izany.
JotForm dia mpamorona endrika mora ampiasaina:
Mitandrema amin'ny fampiasana ireo endrika boilerplate izay ampidirina amin'ny tranokalanao na serivisy e-varotra satria matetika ireo dia ahitana saha data, izay matetika midika hoe manao marimaritra iraisana amin'ny angona angoninao ianao. Amin'ny maha mpamorona anao dia fantatrao ny angona manokana ilainao handraisana fanapahan-kevitra lehibe, izay midika fa manana safidy hamboarina endrika iray hifanaraka amin'ny mason-tsivanao no manakiana.
Farito ny angonao
Ny endrika an-tserasera dia manome anao fitaovana mety hanangonana ny angon-drakitra manan-danja indrindra, ary hangataka izany amin'ny fomba manampy anao. Ny sasany amin'ireo angona ilainao dia tsy maintsy atao, noho izany dia mila manondro saha manokana ianao araka ny takiana alohan'ny handefasana ny taratasy. Manakana anao tsy hahazo fampahalalana ampahany izany ary tsy maintsy miditra amina mailaka miverimberina miaraka amin'ny mpanjifa hahazoana izany, izay amin'ny ankapobeny dia miteraka fivarotana very. Ny mpanome endrika an-tserasera tsara dia manome anao io fifehezana io.
Ho fanampin'izay, azonao atao ny miantoka ny angona tsy maintsy omena amin'ny endrika marina, toy ny fampidirana ny kaody faritra misy laharan-telefaona, na ny adiresy mailaka manana ny famantarana @ na misy ny .com, .net na .org, sns. . Ny antony tianao hanaovana an'io dia ny fiantohana ny fahamendrehan'ny angona. Raha avelanao ny mpampiasa hanoratra an-tsokosoko ny angon-drakitra misy azy ireo dia mety ho diso ny valiny ary mandresy ny tanjon'ny fampiasana endrika an-tserasera izany.
Aza alevina amin'ny mpanjifa amin'ny fanontaniana tsy misy ilana azy ny mpanjifa
Iray amin'ireo lesoka lehibe indrindra ananan'ny olona amin'ny endrika an-tserasera ny fampisehoana ny sehatry ny angon-drakitra rehetra, izay mety hahatonga endrika iray ho lava loatra ary tsy ho voaro mafy. Izany dia mahatonga ny mpitsidika handao ny endrikao alohan'ny hanombohany satria toa tsy dia maharitra loatra ny famitana azy io.
Mahomby kokoa ny mampiditra lojika misy fepetra. Midika izany fa raha manome valiny manokana ny mpanjifa, dia manokatra andiana data vaovao izy. Ohatra, raha toa ka misy fanontaniana ny endrika, toy ny, Sambany ve ianao mividy ny vokatray?, azo valiana hoe "eny" na "tsia". Ny valiny eny dia afaka manokatra andiam-panontaniana vaovao izay manontany hoe amin'ny fomba ahoana no nahalalan'ny mpanjifa ny momba ny vokatrao, hatolony ve izy io ary hafiriana no nanaovan'izy ireo fikarohana talohan'ny nividianany. Raha tsia ny valiny dia manokatra fanontaniana maromaro izy.
JotFormlojika misy fepetra:
Ny fampiasana lojika misy fepetra dia midika fa ho hitan'ny mpanjifa fotsiny ny valiny amin'ireo fanontaniana mifandraika amin'izy ireo, fa tsy mila mandingana andiana fanontaniana tsy misy ifandraisany. Mampitombo ny tahan'ny valiny izany ary manatsara ny maha-marina ny valiny satria tsy mahatsiaro terena hamaly ny fanontaniana rehetra ny mpanjifa, na mihatra amin'izy ireo na tsia.
Rehefa vita ny endrika an-tserasera dia azo afindra eo no ho eo amin'ny fitaovanao fandalinana safidy, na takelaka na rindrambaiko CRM be pitsiny io. Koa satria nohomboana ny fotoana sy ny daty, dia azonao atao ny mamakafaka azy amin'ny fotoana tena izy. Fanampin'izany, satria ny sehatra angon-drakitra tsirairay dia voasambotra tsirairay, azonao atao ny manadihady ny fampahalalana hatramin'ny haavon'ny granular kely indrindra ka hatramin'ny ambaratonga makro avo indrindra. Midika izany fa azonao atao ny mamakafaka ny fampielezankevitra ara-barotra anao raha misy izany, amin'ny antsipiriany mifandraika, ary ataovy izay fanitsiana ilaina.
Maka antsitrika lalina
Koa satria ny endrika an-tserasera dia afaka miasa ho toy ny mpanangona angon-drakitra farany ho an'ny fifandraisan'ny mpanjifa, ao anatin'izany ny fanontaniana fanohanana sy ny baiko an-tserasera, azonao atao ny mandinika ny tantaran'ny mpanjifa miaraka amin'ny orinasanao. Ho fantatrao hoe impiry ny mpanjifa manafatra ny vokatrao, na impiry nifandray tamina fanohananana, ary koa ny karazana fanontaniana napetraka. Ny tombony azo amin'ny fisamborana an'ity haavon'ny data ity dia azonao atao ny mandinika azy amin'ny alàlan'ny masontsivana isan-karazany, ary mitady lamina ary hamaha ireo olana kely alohan'ny hahatongavan'ny aretin'andoha be. Ohatra, mety ho hitanao fa amin'ny famoahana andalana vokatra vaovao, dia mahazo fanontaniana maro momba ny fandefasana iraisam-pirenena ianao, noho izany dia mety te-hanavao ny fampahalalana momba ny fandefasana anao ianao ary / na hampalaza azy bebe kokoa ao amin'ny tranonkalanao.
Azonao atao koa ny mampiasa ny angon-drakitra handinihana ireo lamina fividianana ary hahatakatra izay mpanjifa mividy ny vokatrao foana amin'ny andro voalohany famotsorana. Mety hitarika amin'ny famoronana klioban'ny mpividy matetika sy topi-maso mialoha manokana momba ny fikandrana na fividianana varavarankely mialoha ho an'ireo mpanjifanao mahatoky indrindra izany. Ny fahafaha-manao tsena micro amin'ny mpanjifanao dia tsy misy farany, raha mbola manana angona marina ianao hanampy amin'ny fampivoarana ny paikady.
Ny endrika an-tserasera dia manome tanjaka sy fahafaha-manao betsaka. Midika izany fa afaka mamorona endrika haingana ianao hanangonana angona angon-drakitra ilainao handraisana fanapahan-kevitra amin'ny orinasa. Fanampin'izay, azonao atao ny manangana sy manaparitaka ireo takelaka ireo ao anatin'ny minitra vitsy monja, midika izany fa afaka mamakafaka kokoa ny ROI anao ianao.
Tags: endrika mpanjifafamakafakana endrikampanamboatra endrikafamaranana endrikaendrika dataendrika sahamametraha fanontanianatenyJotFormmpanamboatra endrika an-tseraseraendrika an-tserasera
Steve Hartert no Chief Marketing Officer ao JotForm, fitaovana fananganana endrika endrika an-tserasera. Steve dia manana traikefa momba ny fitantanana marketing mihoatra ny 30 taona ary niara-niasa tamin'ny orinasa Fortune 500 sy ny fanombohana. Manana mari-pahaizana licence avy amin'ny University of Polytechnic State California, Pomona, ary MBA avy amin'ny California State University, San Bernardino.